မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ကာမ အားတိုးေ ဆးေ တွကြောင့် ဘယ်လို ဆိုးကျိုးေ တွ ဖြစ်နိုင် သ လဲ ….. ?
ကာမ အားတိုးေ ဆးေ တွကြောင့် ဘယ်လို ဆိုးကျိုးေ တွ ဖြစ်နိုင် သ လဲ ….. ?
ကာမအားတိုးဆေးဆိုတာ ကာမဆန္ဒကို မြင့်တက်စေတဲ့ အစားအစာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကုတင်ပေါ်မှာ ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားအများစုက အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ ဆေးကိုဝယ်မယ်၊ ပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ အချိန်ကြာကြာလေး ချစ်ပွဲဝင်မယ်၊ အဲဒီနည်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ယောက်ျားပီသမှုကို ခံစားနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်က ပါမောက္ခတွေကတော့ အဲ့ဖြစ်စဉ်တွေက ပန်းသေပန်းညှိုးလိုမျိုး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို နာနာကျင်ကျင် ခံစားရစေနိုင်တယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။
ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါဆိုတာ အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့ ထောင်မတ်မှုမျိုးကို မရရှိတာ မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေတစ်ရပ်ကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒါဟာ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ သွေးတိုးနဲ့ ဆီးချိုလိုမျိုး ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေက ထိုဖြစ်ရပ်ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။
လိင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ အစားအစာအချို့ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Maca (ပီရူးတောင်မှထွက်တဲ့ သစ်ဥသစ်ဖုတစ်မျိုး)
ချစ်မှုရေးရာနဲ့ ပက်သတ်ြပီး အသုံးများတာကတော့ ဂျင်ဆင်းပါပဲ။ ဂျင်ဆင်းက ချစ်မှုရေးရာကိစ္စတွေမှ အစွမ်းထက်တယ်လို့ သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။
လေ့လာထားချက်အရ ဂျင်ဆင်းကျွေးထားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ လိင်စိတ်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိပေမယ့် လူတွေမှာ သက်ရောက်မှု ရှိမရှိတော့ သက်သေပြထားတာ မတွေ့ရပါဘူး။
Yohimbe ဆိုတာကတော့ အာဖရိကနဲ့ အိန္ဒိယတို့မှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ဆေးပင်တစ်မျိုးပါ။
သူက ကျောရိုးမမှာရှိတဲ့ နာဗ်ကြောဗဟိုလေးတွေ ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ ထိုနည်းဖြင့် လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှု မြင့်တက်စေခြင်းမရှိဘဲ လိင်တောင့်တင်းမှု ပမာဏကို တိုးတက်စေပါတယ်။
ကံမကောင်း အကြောင်းမလှတဲ့အချက်ကတော့ ထိုဆေးပင်ကို မှီဝဲရင် စိတ်ပူပန်တာ၊ အားနည်းတာ၊ လှုံ့ဆော်မှု လွန်ကဲတာ၊ သွက်ချာပါဒ နဲ့ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်တာတွေ စတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Spanish Fly ။ ။ဒါကတော့ အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ အန္တရာယ်အကြီးဆုံး ဆေးတစ်မျိုးပါပဲ။
ဒီဆေးသုံးပြီးရင် ဖြစ်ပေါ်တဲ့ လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာ လိင်အင်္ဂါတစ်ဝိုက်ကသွေးတွေရဲ့ အလျှင်အမြန် စုစည်းမှုကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ပါးစပ်နဲ့ လည်ချောင်းတွေကို လောင်စေနိုင်တဲ့ အဆိပ်တစ်မျိုးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ ဆီးလမ်းကြောင်းမှာအနာဖြစ်ခြင်းနဲ့ အခန့်မသင့်ရင် သေစေနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားအများစုက လိင်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ကျေနပ်မှု မရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမျိုးသားတွေ လိင်စိတ်ကျေနပ်မှု မရရှိတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောလေ့ရှိတာတွေကတော့ အချိန်ကြာကြာတောင့်တင်းမှုမရှိခြင်း၊ သက်လုံမကောင်းခြင်းနဲ့ လိင်ဆက်ဆံဖော် စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေနိုင်တဲ့ တောင့်တင်းမှုကို မရရှိခြင်း၊ ရေရှည်မထိန်းနိုင်ခြင်းစတဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင်မပြေမှုတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီကိစ္စတွေက စုံတွဲတွေကြားမှာ နားလည်မှုလွဲခြင်းနဲ့ ဖိအားတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို မဖြေရှင်းခင် ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာ အရင်သိရပါမယ်။
ဆေးသုံးခြင်းထက် သင့်ရဲ့ လိင်စိတ် အလုပ်လုပ်ပုံကို နားလည်ခြင်းက အကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
လူအတော်များများက သူတို့ရဲ့ ဆက်ဆံဖော် ဒါမှမဟုတ် ဆရာဝန်တွေကို ပြောပြရမှာ ရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆေးသုံးတာလိုမျိုး အလွယ်လမ်းနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းချင်ကြပါတယ်။
ဆေးဆိုတာ အန္တရာယ်ကင်းမကင်း မသေချာပါဘူး။
ဆရာဝန်တွေတောင်မှ အမျိုးသားအားတိုးဆေးတွေရဲ့ တိကျတဲ့ ပါဝင်နှုန်းနဲ့ အသုံးပြုရမယ့် ပမာဏကို သေချာမသိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီဆေးတွေက သင့်ရဲ့ ရေရှည်ကျန်းမာရေးအပေါ် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆေးပင်တွေပါဝင်တဲ့ အမျိုးသားအားတိုးဆေးတွေကို မှားယွင်းသုံးစွဲမိရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကြုံတွေ့မှာ အမှန်ပါပဲ။ အဆိုးရွားဆုံး ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့ နာရီအတော်ကြာတိုင်အောင် နာနာကျင်ကျင်နဲ့ တောင့်တင်းမှု ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုဖြစ်ရပ်ဟာ လှုံ့ဆော်မှုမပါပဲ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးကုသမှု လိုအပ်ပါတယ်။ အခန့်မသင့်ပါက ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါကို ဦးတည်သွားနိုင်ပါတယ်။
Viagra လိုမျိုး ညွှန်ကြားချက်ပါတဲ့ ဆေးတွေကတော့ ပန်းသေပန်းညှိုးရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေအတွက် အာနိသင်သက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များရဲ့ ညွှန်ကြားမှုအတိုင်းသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။
Credit: Hello ဆရာဝန်
Author MSSK at 4:03:00 PM